Baarlamaanka Kenya oo uyeeray W/A/ dibadda Kenya | Wardoon
Home Somali News Baarlamaanka Kenya oo uyeeray W/A/ dibadda Kenya
Baarlamaanka Kenya oo uyeeray W/A/ dibadda Kenya
Baarlamaanka dalka Kenya ayaa u yeeray wasiirka arrimaha dibadda Kenya haweeneyda lagu magaacabo Moniko Jumo si wax looga weydiiyo xiriirka dalalka Kenya iyo Soomaaliya.
Haweeneyda Wasiirka Arrimaha Dibedda ka ah dalka Kenya, Moniko Jumaayaa la filayaa inay maanta hor-tagto Barlamaanka dalkaasi, si ay Xildhibaanadda wax uga weydiiyaan Khilaafka Somalia iyo Kenya iyo waxa sababay in loo yeero Safiirka Kenya u joogay dalka Somalia, Lukas Tumbo.
Guddoomiyaha Guddiga Difaaca iyo Xiriirka Dibedda ee Barlamaanka dalka Kenya, Katoo Metitoayaa sheegay inay doonayaan inay ogaadaan xaalladaha sababay in loo yeero danjiraha Kenya u joogay Somalia.
Guddoomiyaha Guddigaasi oo la hadlay Wargeyska The Star ee ka soo baxa Nairobi, waxa uu tilmaamay inay Xildhibaanadda doonayaan si ay u helaan faahfaahinta waxa dhacay iyo halka looga socon doono.
Kulanka maanta loogu yeeray Wasiirka Arrimaha Dibedda ka ah dalka Kenya, Moniko Jumaayaa la sheegay inuu ahaa mid qorsheysan oo looga wada xaajoonayo Qoraalka Miisaaniyadda Siyaasadda ee dalkaasi, balse Guddoomiyaha Guddiga iyo Xiriirka Dibedda ee Barlamaanka dalka Kenya, Katoo Metitowaxa uu xusay inay haystaan xilli kayd ah oo ay Wasiiradda kala hadli doonaa Danaha Dadweynaha.
Sabtii hore ayey ahayd, markii uu Xoghayaha Joogtadda ee Wasaaradda Arrimaha Dibedda ee Kenye, Macharia Kamausoo saaray Hadal-qoraal oo lagu sheegay inay dowladda Kenya u yeeratay Danjirihii u joogay Somalia iyo in Danjirihii Somalia u joogay Nairobi lagu amray in dib ugu laabto dalkiisa hooyo.
Dowladda Kenya waxay tallaabadaasi ku sheegtay inay kaga soo horjeedaan go’aankii ay Dowadda ku xaraashtay Xirmooyin ka mid ah Shidaalka iyo Gaaska ku jira xuduud-baddeedka ay Kenya ay sheeganeyso.
Previous articleAxmed Madoobe oo Magacaabay xilal cusub
Next articleDAAWO:-Wasiirkii hore ee A/Dibadda Kenya oo sheegay in somaliya horay ugu sixiixday bada laysku haysto
Jeneraal Odawaa Yuusuf ayaa magacaabay guddi ka kooban Taliya-yaasha ciidmada
Madaxweyne amaray in la laayo dibed-baxayaal+SAWIRRO